ပြည် ကောင်း အောင်: June 2011
အပြောအဟောပညာ။ ။ အိုဘားမား မကြာသေးမီက ပြောခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းတခု။
( အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားက ဒီလ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေမှာ အမေရိကန် တပ်ဖွဲ့ တချို့တဝက်ကို အဖဂနစ္စ တန်နိုင်ငံက ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတော့မဲ့ အကြောင်း သူ့နိုင်ငံက ပြည်သူတွေကို မိန့်ခွန်း ပြောခဲ့ ပါတယ်။ သူ စကားပြော ကောင်းတာကိုတော့ ကျနော် ဝင်ပြောနေစရာ မလိုပါဘူး။ သူ့ သမ္မတရာထူးလက်ခံ မိန့်ခွန်း ဆိုရင်လည်း အင်မတန်ကောင်းတာ လူတိုင်း အသိပါ။ အခု အောက်မှာ ကျနော် တင်ပြထားတဲ့ သူ့ရဲ့ မိန့်ခွန်းက ( မိသားစု အချင်းချင်းကြား ပြောဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ) ရိုးရိုးလေး ပြောထားတဲ့ မိန့်ခွန်းတခုပါ။ အခမ်းအနား တခုခု အတွက် special ပြောရတာ မဟုတ်တာကို ဆိုလိုတာပါ။ သူ့ရဲ့ ပြည်ပအရေး၊ ပြည်တွင်းအရေး ပေါ်လစီ ကို ပြည်သူကို ချပြတဲ့ မိန့်ခွန်းမို့ ဒီမိန့်ခွန်းဟာ အမေရိကန်တွေ အတွက် အရေးတော့ ပါပါတယ်။ ဒီ မိန့်ခွန်းထဲမှာ သူက ပထမဦးဆုံး အမေရိကဟာ ဘာဖြစ်လို့ စစ်ပွဲတွေထဲမှာ ပါနေရသလဲ၊ ကမ္ဘာ့အရေးတွေ မှာ ပါနေရသလဲ ဆိုတာကို အခွန်ထမ်းပြည်သူ တွေကို နားဝင်အောင် ရှင်းပြပါတယ်။ နောက်မှ အာဖဂန်မှာပြုဖွယ်ကိစ္စလည်း သိပ်မရှိတော့ပြီမို့ ကိုယ့်ပြည်တွင်း အရေးကိုလည်း အားထည့်ပြီး လုပ်ကြပါစို့လို့ ပြောသွားတာလေးတွေဟာ (နိဒါန်း) ချီပုံလေး၊ အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ရှင်းပြပုံလေး၊ နိဂုံးချုပ်ပုံလေးတွေက အချိတ်အဆက် မိမိနဲ့ အင်မတန် ပြေပြေပြစ်ပြစ်၊ လှလှပပလေး ရှိလွန်းလို့ Public Speech ကို လေ့လာနေသူ၊ စိတ်ဝင်စားသူ တွေ အတွက် တစုံတရာ အကျိုး ရှိနိုင်တယ်လို့ ယူဆတာကြောင့် ကျနော့်ဘလော့ဂ်မှာ တင်ထားချင်စိတ် ပေါက်သွား မိပါတယ်။ ကျနော် ဘာသာ ပြန်လိုက်ရင် သူ့နဂိုလှနေတာလေး ပျက်သွားမှာစိုးလို့ရယ်၊ ဒီလောက်ကတော့ ကိုယ့်လူတွေက “လာထား၊ အေးဆေးပဲ” ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်မိတာကြောင့်ရယ် တတ်ယောင်ကားလုပ်ပြီး ဘာသာမပြန် တော့ဘဲ နဲ့ မူရင်းအတိုင်းပဲ ထားလိုက်ပါကြောင်း။ ပထမ အပိုဒ် လောက်ပဲ ဖတ်ကြည့်ပါလေ။ ခင်ဗျား ဆက်ဖတ်ချင် သွားပါ လိမ့်မယ်။း))
မှတ်ချက်။ ။ သူ ဒီမိန့်ခွန်းကို ဘယ်လောက် sincerely ပြောခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ကျနော် မမှန်းဆတတ်ပါ။ မဝေဖန်လိုပါ။ ကျနော်ကတော့ ဒီမိန့်ခွန်းကို ကောင်းမွန်သော စကားပြောအတတ်ပညာ တရပ်အဖြစ် နှစ်ခြိုက် မိရုံပါ။ Youtube က ဟောဒီ Video Link ကနေယူထားပါတယ်။
အမေရိကန် သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမားဟာ သူတော်ကောင်းယောင် ဆောင်နေတာ များလား၊ အိုစမာ ဘင်လာဒင်ကို ဟိုတလောက Navy SEAL က သွားသုတ်သင်လိုက်တယ် ဆိုတာဟာ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်း များလား၊ တကယ် တော့ အိုစမာကို သတ်ခဲ့တာ ကြာလှရော့ပေါ့ ( ဝါ ) အခုထိ အသက်ရှင်လျှက် ရှိနေဆဲပဲ ဆိုတာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား အစရှိတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေအားလုံးကို အတွေးပွား ထားတဲ့ Youtube clip တခုကို ဘလော့ဂါ နှမငယ်တယောက်က ဘက်ညီသွားအောင် ဆိုပြီး ပေးပို့လာလို့ အဲဒီ ဗီဒီယို ကလစ်ကိုလည်း တင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ လူတွေ ရန်လာလုပ်ရင်တော့ ညည်းလည်း လာကူရမယ်နော်။ ဟွင်း .. ဒါပဲ ...း))
Posted by pyaykaungaung at 3:22 PM 8 comments:
Labels: article Obama's Speech
အပစ်ရပ်သွားသော အေကေ-၄၇ တလက် ( My Birthday Resolutions )
"I can't control time, but I can influence the manner in which it passes.
I'll make this year awesome." [ Anonymous ]
ဘလော့ဂါ၊ ကဗျာဆရာ အကိုအောင်သာငယ်က သူ ၄၇ နှစ် ပြည့်ခဲ့စဉ် ရေးတဲ့ ကဗျာတပုဒ်မှာ သူ့ကိုယ်သူ အေကေ-၄၇ သေနတ် တလက်ဖြစ်လေဟန်ရေးထား တာကို ဖတ်မိ၊ ကြိုက်မိလို့ အေကေ-၄၇ ဆိုတဲ့ စကားလုံး လေးကို ကျနော် ငှားသုံးထားပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့..။ ကျနော်လည်း ဒီနေ့ ( ဇွန် ၂၂ ၊ ၂၀၁၁ ) မှာ (၄၇)နှစ် ပြည့်ခဲ့ ပါပြီ။ ကျနော် ဒီနေ့ ဟောဒီ Birthday Resolutions တွေကို ချဖြစ်ပါတယ်။ ( အရင်က အတွေ့အကြုံတွေအရ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် လူမသိသူမသိ resolutions တွေချထားရင် ဖောက်ဖျက်ချင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆင်ခြေတွေပေးပြီး ဖောက်ဖျက်မိတတ်လို့ အခု ဒီနေရာကိုလာတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို သက်သေနေရာမှာထားပြီး နောင် ကိုယ့် စကား ကိုယ် မဖောက်ဖျက်မိအောင် အဲဒီ resolutions တွေကို လူသိရှင်ကြား ကြေငြာနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။း)
၁။ ဒီနေ့က စလို့ ကျနော် သက်ဆုံးတိုင်ထိ အရက်သေစာ သောက်စားခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သွားမယ်။
( ဒီတခါ တော့ တကယ်ပါ။ အဲဒါကြောင့် အများသိအောင် မောင်းခတ်ကြေငြာ ဝံ့တာပါ။ ကျနော့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အတွက်နဲ့ ရှေ့လျှောက် အားစိုက်ပြီးလုပ်ရ ကိုင်ရဦးမဲ့ အလုပ်တွေအတွက်ပါ။ ဒါကြောင့် နောင်များ ကျနော့်ဆီ က အရက် post မမျှော်လင့်ပါနှင့်တော့း))
၂။ ဒီနေ့က စလို့ သတိနဲ့နေတဲ့ အလေ့အကျင့်ကို ထူထောင်သွားမယ်။ [ မဂ်၊ ဖိုလ်၊ နိဗ္ဗာန် လိုချင်လို့၊ အဲဒီအတွက် အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေချင်လို့ လုပ်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာ စကားစပ်မိလို့ ပြောရရင် ကျနော်က အခု Buddhist အစစ်တယောက်လည်း မဟုတ်တော့ဘူး နဲ့တူပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ ကမ္မနိယာမ ( Law of Karma: "Any action ( cause ) has an equal effect." ) ကို ယုံကြည်နေသေးပေမဲ့ I'm not supposed to end my Samsara because I myself didn't start it. It is "Something" that made me get involved in Samsara, so it is also responsible to end my involvement in Samsara. လို့ဆိုတဲ့ ဂျစ်ကန်ကန် အတွေး မျိုး ဝင်နေမိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သံသရာဝဲဩဂမှ လွတ်မြောက်ရေး အတွက်တော့ဖြင့် ကျနော် ပူပူပန်ပန်မရှိလှပါ။ နောက်ပြီး နောင်ဘဝ ( ကမ္မနိယာမအရ ရှိကောင်း ရှိနိုင်ပါတယ် ) ဆိုတာရှိရင်လည်း ကျနော့်မှာ အတော်အတန် လှပတဲ့ လူ့နှလုံးသား တခုရှိတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် ဒီလိုလူ့နှလုံးသားမျိုးနဲ့ နောင် ဘဝမှာ “နွား” သွား မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။ ( ကျနော် ဒီဘဝမှာ လူလို နေထိုင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ အချည်းနှီးတော့ မဖြစ်တန်ရာ။ ) ဒီကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်မှာ “မြင့်မိုရ် တောင်” မရှိတာ သေချာသလိုပဲ ဒီကမ္ဘာမြေပြင်ရဲ့ အောက်မှာလည်း “ငရဲပြည် ရှစ်ထပ်” မရှိနိုင်တာ သေချာတာကြောင့် ကျနော် ငရဲကျသွားနိုင်တယ် လို့လည်း မပူပန်မိပါဘူး။ ဒါကြောင့် စုစု ပေါင်းလိုက်ရင် နောင်တမလွန်ဘဝနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ဖြင့် ကျနော့်မှာ အပူအပင် မရှိသလောက်ပဲလို့ ဆိုနိုင် ပါတယ်။ ဒီလို မပူပန် တဲ့အတွက် ကျနော့်အဖို့ တမလွန်ဘဝအတွက် စိတ်လုံခြုံမှုရအောင် “တံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ ဘာသာတရား” တခုခုကို မဖြစ်မနေ လက်ဝယ်ကိုင်ထားဖို့လည်း မလို အပ်ပါဘူး။ အခု ကျနော် ဒီ “သတိနဲ့ နေ တဲ့ အကျင့်” လုပ်ချင်တာက What am I doing right now? လောက် သတိလေးကပ်ပြီး secularly, worldly-mined သိနေရုံပါ။ ဒီဘဝအတွက် မလုပ်သင့်တာ မလုပ်မိအောင်၊ လုပ်သင့်တာ လုပ်မိအောင်လို့ပါ။ ခုလို ကျနော့်ရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရိုးသားစွာ ပြောပြရင်း အခြားသူများရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်နာကျင်စေခဲ့ရင် အနူး အညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျနော်က “ရိုးသားတာဟာ ဘယ်တော့အခါမဆို/ ဘယ်သူ့ထက်မဆို မှန်တယ်” လို့ယုံလို့ ရင်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း ပြောနေမိတာပါ။ ]
၃။ ဒီနေ့က စလို့ အခြားလူတွေမှာ ကျနော့်ကို ဖက်လှဲတကင်း လှိုက်လှဲဖော်ရွေဖို့၊ ကျနော့်အတွက် တွေးပေးဖို့ တာဝန်မရှိကြောင်း အမြဲတမ်း သတိရနေမယ်။ ( ကျနော်က ကိုယ်ခင်သလောက် ပြန်အခင်မခံ ရရင် ဝမ်းနည်းသလို ရှိတတ်လွန်းလို့ ဒီလိုစိတ်မျိုး လေ့ကျင့် မွေးမြူထားမှ ဖြစ်ပါမယ်။ I'm so childish :)
၄။ ဒီနေ့က စလို့ သမ္မာအာဇီဝကျကျ ငွေကြေးချမ်းသာနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းများကို လိပ်ပြာသန့်စွာ ကြံဆ တွေးတောနေမယ်။ ( ကျနော် အသက် ၆၀ ပြည့်ဖို့ နောက် ၁၃ နှစ်ပဲ လိုပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ယခင်က ငွေ ကို ငမ်းငမ်းတက်ဖြစ်ရမှာ ရှက်သလိုရှိလှတဲ့ attitude မျိုးရှိခဲ့တာကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး၊ ကျနော့်ရဲ့ နောင်ရေး (အိုစာနာစာ) အတွက် ဒီဆယ်စုနှစ်ထဲမှာတော့ ငွေကို ငမ်းငမ်းတက် မဟုတ်တောင် အာရုံစိုက်ပြီး ရှာဖွေဦးမှလို့ တွေးလာရပါတယ်။ ကျနော်က တယောက်တည်း အိုရမဲ့သဘော ရှိပါတယ်။ တကိုယ်တည်း အဖိုးကြီး အနေနဲ့ လက်ထဲမှာငွေရှိနေရင်များ materially secured ဖြစ်မလားလို့ပါ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ကျနော် နောင် ဘဝကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး emotionally stable ဖြစ်သလောက် အခုဘဝအတွက် ကိုယ့်နားမှာ အဖော်အလှော် ( အဖွားကြီး ) တယောက်မရှိဘဲနဲ့ အိုမင်းရမဲ့ ကိစ္စ တွေးမိတိုင်းတော့ insecured ဖြစ်မိပါတယ်။ ဟင်း..ဟင်း.. ဖွန် ကြောင်ချင်သေးတား))
၅။ ကျနော် မြန်မာပြည်အတွက်၊ humanity အတွက် တခါမှ၊တခုမှ dedicate မလုပ်ဖူးတာမို့ တခုခု လုပ်ပေးချင် တဲ့စိတ်နဲ့ အိပ်မက်တချို့ကို မနေ့ကအထိ သယ်ပိုး ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ဟာ ခါးမသန်ဘဲ တောင်ကြီး ကို ဖြိုမယ်လို့ မာန်ကြီးနေတဲ့ ခါချဉ်ကောင်တကောင် မျှသာဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကြာလေ ကြာလေ ထင်ရှား လာတဲ့ အတွက် ကာလအတန်ကြာ ထမ်းပိုးလာခဲ့တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ အိပ်မက် များကို ဒီကနေ့ ရင်နာနာနဲ့ လွှတ်ချလိုက် ပါ တယ်။ ( အဲဒီအိပ်မက်တွေက ဘာတွေလဲဆို တာ ကျနော်နဲ့ ခင်မင်တဲ့ မိတ်ဆွေတွေ သိကြပါလိမ့်မယ်။)
[P.S: ကျနော့် ဘာသာရေး အယူအဆများနှင့် ပတ်သက်၍ “ကျနော်ကတော့ အဲသည်လို ဖြစ်နေပါကြောင်း” ရိုးသားစွာ ပြောပြခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော့် အယူအဆ မှန်နိုင်သည်၊ မှားနိုင်သည်ကို ကျနော်သိပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျနော် အယူလွဲနေသည်ဟု (စေတနာဖြင့်) မထောက်ပြကြပါရန် အနူးအညွတ် ကြိုတင် တောင်းပန်ထားလိုပါသည်။ အကြောင်းမှာ အများပြည်သူတွေ ကိုးကွယ်နေကြသော ဘာသာတရားများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျနော် အကျယ် အကျယ် အပြန်အလှန် မဆွေးနွေးလိုသော ကြောင့်( သာ ) ဖြစ်ပါသည်။ ]
၆/ ၂၂ / ၂၀၁၁
Posted by pyaykaungaung at 12:03 AM5comments:
Labels: article မွေးနေ့စာစု
ကျွ န်ု ပ် ၏ လ မင်း ( ဇာတ် ညွှ န်း )
[ ကျနော် ဘဝတကွေ့မှာ ဇာတ်ညွှန်းရေးဆရာ ဖြစ်ချင်စိတ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့က ရုပ်ရှင်မင်းသား တဦး၏ အိမ်မှာ နေထိုင်ကာ (သူတို့၏ အလုပ်တွေကို ဝိုင်းကူညီလုပ်ပေးကာ) ဇာတ်ညွှန်းရေးနည်းပညာကို လေ့လာ ကြည့်ဖူး ပါသည်။ အောက်ပါ “ဇာတ်လမ်း အခန်းစဉ်များ ( Scene Serials )” မှာ ဇာတ်ညွှန်းတခုလုံး၏ အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပြီး ဇာတ်ညွှန်း တခုလုံး၏ မြေပုံဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို စဉ်က ကျနော် လက်သင် အနေဖြင့်ရေးခဲ့ဖူးသော ဇာတ်ညွှန်း တပုဒ်မှ “ဇာတ်လမ်း အခန်းစဉ်များ” ကို ရယ်စရာ မောစရာ အနေဖြင့် တင်ပြလိုက်ပါသည်။ Format ကတော့ Professional Standard ဖြစ်ပါသည်။ “-ပုံ” ကို ကျနော်က လျှော့ထားပြီး နောက်ဆုံးမှာမှ “-ပုံ” ထား သော် လည်း တကယ်တော့ အလယ်မှာလည်း သုံးခွင့် ရှိပါသည်။ ]
( Scene Serials )
S.1 : Scene 1
နေ့ : နေ့အခါ ရိုက်ကူး ရမည့် scene
ည : ညအခါ ရိုက်ကူးရမည့် scene
တွင်း : အဆောက်အဦတွင်း ရိုက်ကူးရမည့် scene ( indoor)
ပြင် : အဆောက်အဦပြင်ပတွင် ရိုက်ကူးရမည့် scene (outdoor)
[ ]: ပါဝင်ရမည့် သရုပ်ဆောင်များ
နေ့/တွင်း.............[ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ ကုမ္ပဏီ အမှုဆောင်လူကြီးများ]
“အောင်စေရာ” ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ဥက္ကဌ ဦးအောင်ဇေယျာ နှင့် အမှုဆောင်လူကြီးများ ကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းကိစ္စ ညှိနှိုင်း ၊ တစုံတရာ ဆုံးဖြတ်၊ တာဝန် အသီးသီး ခွဲဝေယူ၊ အချို့ မရှင်းလင်းသည် များကို မေးမြန်း၊ ဥက္ကဌ နှင့်MD တို့က ပြန်လည်ရှင်းလင်း ဖြေကြား၊ အစည်းအဝေး ရုပ်သိမ်းပုံ။
နေ့/ပြင် ................[ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ကားဒရိုင်ဘာ]
ရန်ကုန်မြို့တော်၏ အထင်ကရ အဆောက်အဦများကို အပေါ်စီးမှပြ၊ ဘေးတိုက်ပြ၊ အောက်မှပင့်၍ပြ၊ မြို့လယ် ကားရှုပ်ထွေးမှု၊ ယင်းတို့အလယ်မှ ခန့်ညား တောက်ပြောင်သော ကားတစီး၊ ရန်ကုန်မြို့၏ အလှပ အသာယာ ဆုံး ကားလမ်းများ တလျှောက် မောင်းနှင်သွားပုံ၊ ( Zoom in ) ကားနောက်ခန်းမှ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ ကားသည် လူကုံထံ ရပ်ကွက် လမ်းချိုးတခုသို့ ချိုးဝင်သွားပုံ။
နေ့/တွင်း..................[ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ လမင်းငယ်၊ ကားဒရိုင်ဘာ]
ဧည့်ခန်းအတွင်း “လမင်းငယ်” advanced computer program တခုဖြင့် တစုံတရာ ဖန်တီးနေပုံ၊ ကားသံသဲ့သဲ့ ကြား၊ အပြင်ဖက် ထွက်ကြည့်၊ ဦးအောင်ဇေယျာ စီးလာသည့်ကား ခြံရှေ့ရောက်၊ လမင်းငယ် အပြေး တပိုင်း ဖြင့် ရွှင်ပြစွာ သွားရောက်ကြိုဆို၊ ဦးအောင်ဇေယျာ ကားပေါ်မှ ဆင်းပြီး လမင်းငယ်နှင့်အတူ အိမ်ထဲ ဝင်လာကြပုံ။
နေ့/တွင်း .............[ဦးအောင်ဇေယျာ၊ လမင်းငယ်၊ သူမ၏သူငယ်ချင်းများ]
လမင်းငယ်၏ သူငယ်ချင်းမိန်းကလေးများ ကားကိုယ်စီဖြင့် ရောက်လာကြ၍ လမင်းငယ် ထွက်ကြို၊ အဝတ်
အစား ခပ်ဟော့ဟော့တွေ ဝတ်ထားကြသည့် သူမ၏ သူငယ်ချင်းများက လမင်းငယ်အတွက် စတ်ိတ်ရှိုး လက်မှတ် တစောင် ပိုဝယ်လာ ကြောင်း ပြောကြ၊ လမင်းငယ် ဖခင်ထံ ခွင့်တောင်း၊ ဖခင်က အသာတကြည် ခွင့်ပြု၊ လမင်းငယ် ပါတိတ်ဝမ်းဆက် (ရိုးရိုးထမီ ) ဖြင့် ထွက်လာ၊ သူမ၏ သူငယ်ချင်းများ ဆူညံစွာ ဝေဖန်၊ ဦးအောင်ဇေယျာက လူငယ်ဘဝမှာ “လွတ်လပ်ပေါ့ပါး” စွာ နေခွင့်ရှိကြောင်းပြော၊ လမင်းငယ်က “သူတို့ဝတ် ထားတာတွေက မလွတ်လပ် မပေါ့ပါးဘူး အဖေရဲ့” ဟု ရယ်မောကာပြော၊ ဟော့ရှော့ ဝတ်မှ စတိတ်ရှိုး နှင့်တန် သည်ဆိုလျှင် မလိုက်တော့ဘူးဟု ပြောသဖြင့် သူမကို ခေါ်သွားရပုံ။
( လမင်းငယ် ထည့်ပြောရန် အရေးကြီးသည့်စကား။ ။ “အများဝတ်နေတဲ့ ဖက်ရှင်ကို ကိုယ်လိုက်ဝတ်မိရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ညံ့ဖျင်းသူ လို့ခံစားရတယ်။ နောက်ပြီး ငါက ငါ့အသားအရေကို အလကားမတ်တင်း ဖောဖော သီသီ ယောက်ျားတွေကို မျက်စိအလှူ သိပ်မပေးချင်ဘူးဟ။ ဒီအဝတ်အစားနဲ့ charming မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ငါ့မှာ အခြား charming ဖြစ်တဲ့ အရာတွေ ရှိမှာပါဟာ” )
နေ့/တွင်း .................[နေမင်း၊ သော်တာဝင်း၊ ရုံးသူရုံးသားများ]
နယ်မြို့ အစိုးရရုံး တရုံးအတွင်း
ရုံးသူရုံးသားများ စုံညီစွာ အလုပ်လုပ်နေကြပုံ၊ ရုံးအုပ် အရာရှိရုံးခန်းမှ မိန်းကလေး နှစ်ယောက်နှင့်ထွက်လာ၊ သော်တာဝင်းနှင့် ချိုချိုအေးတို့ ဖြစ်ကြောင်း ရုံးသူ ရုံးသားတို့နှင့် မိတ်ဆက်ပေး၊ သော်တာဝင်းကို အထက် တန်း စာရေး ကိုနေမင်းလက်အောက်သို့ပို့၊ သော်တာဝင်းက မိမိကိုယ်မိမိ “သော်တာ”ဟုရည်ညွှန်း လေ့ ရှိရာ နေမင်း ၏ လက်ဟောင်း တပည့်မများ တို့ဌာနကတော့ အခု “နေနဲ့လ၊ ရွှေနဲ့မြ” ဖြစ်သွားပြီဟု နောက်ပြောင်ကြပုံ။
နေ့/တွင်း ................[နေမင်း၊ သော်တာဝင်း]
ရုံးခန်းအတွင်း နေမင်းနှင့် သော်တာဝင်း နှစ်ဦးတည်း စာရင်းများ တကုပ်ကုပ် လုပ်နေ၊ နံရံကပ်နာရီက ၁၂း၃၀ ကိုပြနေ၊ နေမင်းသည် နံရံကပ်နာရီကို မော့ကြည့်ပြီး သော်တာဝင်းကို ပြန်လွှတ်၊ သူကတော့ ဆက်အလုပ်လုပ် ကျန်ခဲ့ပုံ။
နေ့/ပြင် ...................[သော်တာဝင်း၊ အခြား ရုံးဝန်ထမ်း မိန်းကလေးများ]
ရုံးဝင်းအတွင်း သစ်ပင်ရိပ်အောက်/ Benches
ရုံးအပြင်ဖက် သစ်ပင်ရိပ်အောက်မှ စားပွဲပေါ်တွင် မိန်းကလေးတစု လဘက်သုတ် စားနေကြ၊ ရုံးခန်းထဲမှ သော်တာဝင်းထွက်လာ၊ မိန်းကလေးအုပ်စုထံ လာပေါင်း၊ သူမ၏ ထမင်းချိုင့် ဖွင့်စား၊ ကျန်မိန်းကလေး များက နေနဲ့လ ပေါင်းပြီး အလုပ်တွေ ကုန်းရုန်းလုပ်နေကြကြောင်း၊ ကိုနေမင်းမှာ ဌာနတွင်း အရာရှိငယ် ဖြစ် လာနိုင်ခြေ အများဆုံး ရှိသူဖြစ်ကြောင်း၊ သော်တာဝင်းကို စိတ်ကူး မလွဲနှင့်ဟု ပြော၊ ကိုနေမင်း နင့်ကို ချစ်ရေးဆို ပြီးပြီလား မေး၊ မဆိုသေးကြောင်းပြန်ဖြေ၊ “နင်က လည်း ရေလာ မြောင်းပေး လုပ်ဦးလေဟာ” ဟုပြောကြရာ သော်တာဝင်းက “အင်း..ငါက မြောင်းပေးထားပြီးသားပါဟ၊ သူနဲ့ရည်းစား ဖြစ်ရင် ဘယ်လို ခေါ်မယ် ဆိုတာတောင် စဉ်းစားထားပြီးသား” ဟုပြောနေစဉ် နေမင်း မထင်မှတ်ဘဲကြားသွားပုံ။
နေ့/ပြင် ..................[နေမင်း၊ သော်တာဝင်း]
နေမင်းက သော်တာဝင်းကို ချစ်ရေးဆို၊ သော်တာဝင်းက မြန်မာ့ဓလေ့ထုံးစံနှင့်အညီ မိန်းကလေးဖက်က အနည်းငယ် မူရမည်ဖြစ်၍ အဖြေကို ဒီနေ့ မသိချင်သေး နှင့်ဦး။ ဒါပေမဲ့ အကို စိတ်မဆင်းရဲစေရပါဘူး ဟုပြော။ ဆွတ်ပျံ့ကြည်နူးဖွယ် ရှုခင်း၊ ချစ်သူလောင်းလျာ နှစ်ဦး၏ တဦးအပေါ်တဦး ကြင်နာမြတ်နိုးသော အမူအရာ၊ အနစ်နာခံလိုမှု၊ အားထားမှု တို့ကိုပြရန်။ ( ကလေးဆန်သော အမူအရာ မပါစေရ။ )
နေ့/တွင်း .............[သော်တာဝင်း၊ ( သူမတို့ရုံးမှ ) အပျိုကြီးခင်မမ]
ခင်မမက ကြားရသည့်သတင်း မှန်မမှန် တရားခံစစ် စစ်နေ၊ သော်တာဝင်းက ကိုနေမင်း မိမိကို ချစ်ရေးဆို သည် မှာ ဟုတ်ကြောင်း ဝန်ခံ၊ မိမိလည်း သူ့ကို ချစ် ကြောင်းဝန်ခံ၊ သူမ၏မိခင်ကို မပြောပြရန်တား၊ ခင်မမက လက် မခံဘဲ “မရဘူး။ နင့်အမေက မဖြစ်တန်တာ မဖြစ်ရအောင် ဆိုပြီး နင့်ကို ငါ့လက်ထဲ အပ်ထားတာ၊ ငါ ဒီကိစ္စ ကို ပြောရမှာပဲ” ဟုဆိုကာ ထွက်သွား၊ သော်တာဝင်း ငိုကျန်ရစ်ခဲ့ပုံ။
နေ့/ပြင် ...............[နေမင်း၊ သော်တာဝင်း၏မိခင်၊ အိမ်နီးချင်းများ]
နေမင်း၏ အိမ်ရှေ့ ခြံဝတွင် ဒေါ်ရတနာ ( သော်တာဝင်း၏ မိခင် ရွှေဆိုင် ခပ်သေးသေးတခု၏ ပိုင်ရှင် ) က နေမင်းကို မှိုချိုးမျှစ်ချိုးပြော၊ ပြောရင်း ဒေါသထွက်လာ ဟန်ဖြင့် နေမင်းကို ပါးတချက်ရိုက်၊ ထပ်မံဆူပူ၊ နောက် တချက် ပါးရိုက်ရန် အလာ နေမင်းက သူမ၏ ညာလက်၊ ပြီးနောက် ဘယ်လက် တို့ကို ဖမ်းချုပ် ထားရင်း သူမ အရုန်း လွန်၍ သစ်တုံးပေါ် နောက်ပြန်ဖင်ထိုင် လဲကျသွားရာမှ တင်ပဆုံရိုး ကျိုးသွား၊ သူမက နေမင်းကို ထောင် ချမည်ဟု ကြုံးဝါး၊ သော်တာဝင်း လိုက်လာ၊ သူမရော နေမင်းပါ မျက်ရည်ကျမိကြပုံ။
နေ့/တွင်း ..........[တရားသူကြီး၊ နေမင်း၊ ဒေါ်ရတနာ၊ သော်တာဝင်း၊ အခြား]
တရားသူကြီးက နေမင်းအား ဒေါ်ရတနာ တရားစွဲဆိုထားသည့်အတိုင်း အပြစ် ရှိမရှိ မေးမြန်း၊ နေမင်းက အပြစ်ရှိ ကြောင်း ဝန်ခံ၊ အမိန့် ချမှတ်မည့်ရက် ကို တရားသူကြီးက ပြောကြားပုံ။
နေ့/တွင်း ........[တရားသူကြီး၊ နေမင်း၊ နေမင်း၏မိခင်၊ ဒေါ်ရတနာ၊ သော်တာဝင်း၊ အခြား]
တရားသူကြီးက နေမင်းအား ထောင်ဒါဏ် တနှစ်ချမှတ်၊ သော်တာဝင်းက နေမင်းကို တောင်းပန်သော အကြည့် နှင့်ကြည့်၊ နေမင်းကို အချုပ်ကားပေါ် တင်လိုက်ကြ ပုံ။
နေ့/တွင်း .....................[နေမင်း၊ နေမင်း၏မိခင်၊ အခြား]
နေမင်း၏ မိခင် နေမင်းကို လာရောက်တွေ့ဆုံ၊ နေမင်းက “အမေ နေမကောင်းဘူးလား၊ ပိန်လိုက်တာ” ဟုမေး၊ မိမိအတွက် စိတ်မပူရန်ပြောပုံ။
နေ့/တွင်း ....................[ဒေါ်ရတနာ၊ သော်တာဝင်း]
ဒေါ်ရတနာက သော်တာဝင်းအား မြို့မျက်နှာဖုံး တဦး၏သား ဘိုဘို နှင့်နားချ၊ သော်တာဝင်းက လက်မထပ်နိုင် ကြောင်း ငြင်းလိုက်ပုံ။
နေ့/တွင်း ............[နေမင်း၏မိခင်၊ သော်တာဝင်းနှင့် အခြားရုံးဝန်ထမ်းမိန်းကလေးများ]
သော်တာဝင်း အပါအဝင် နေမင်း၏ တပည့်မ ဖြစ်ခဲ့ဖူးကြသူ ရုံးဝန်ထမ်း မိန်းကလေးများ နေမင်း၏ အမေ နေမကောင်းဟု သတင်းကြား၍ နေမင်းအိမ်သို့လိုက်လာ ကြ ၊ နေမင်းမိခင် အိပ်ရာထဲလဲလျှောင်းနေ၊ သော်တာဝင်းက အပြစ်ကြွေးတွေ ဆပ်ပါရစေ အမေ ဟု ဆိုကာ နေမင်းအမေကို နှိပ်ပေး၊ ပြုစု၊ နေမင်းအမေ ကြည်နူး စွာ ဆုပေး၊ ခွင့်လွတ်စကားဆို၊ သော်တာဝင်း နေမင်း၏ စာကြည့် စားပွဲမှ စာအုပ်များကိုကြည့်ရင်း မျက်ရည်ဝဲလာမိပုံ။
နေ့/တွင်း ........[နေမင်း၏မိခင်၊ ရပ်ကွက်သူ/သားများ၊ ရုံသူ/သားများ၊ သော်တာဝင်း]
ရပ်ကွက်ထဲမှ အမျိုးသမီး တစု လက်ပေါ်တွင် နေမင်း၏ အမေ သေဆုံး၊ အခြားရပ်ကွက်သူ/သားများ၊ နေမင်း၏ ဦးစီးအရာရှိနှင့် ရုံးသူ/သား အများအပြားရောက် လာ၊ သော်တာဝင်း နေမင်းအတွက် မချိတင်ကဲ ဖြစ်ပြီး တသိမ့်သိမ့် ရှိုက်ငို၊ ရပ်ကွက်သူ/သားများ နှင့် ရုံးသူ/သားများ တက်တက်ကြွကြွ၊ တက်ညီလက်ညီ ကူညီ၊ နေမင်းပြန်လွတ်လာလျှင် အလွမ်းပြေကြည့်ရှု နိုင်ရန် ဦးစီးအရာရှိ၏ အစီအမံဖြင့် နာရေးဗီဒီယို ရိုက်ကူး။
နေ့/ပြင် ............[သော်တာဝင်း၊ ဘိုဘို၊ ဘိုဘို၏ အပေါင်းအသင်းများ]
သော်တာဝင်း ရုံးကအပြန် လူပြတ်သော ကားလမ်းပေါ်
သော်တာဝင်း ရုံးကအပြန် ဘိုဘို၏ ကားတင် ခိုးပြေးခြင်းခံရ၊ အခြားမြို့တမြို့ရှိ လူနေရပ်ကွက်နှင့် အလှမ်းဝေး သော တည်းအိမ်သို့သွား၍ သော်တာဝင်း အပျိုရည် ပျက်ရပုံ၊ ယင်းတည်းအိမ်တွင် ၄-၅ ရက်ခန့်နေပြီး ဘိုဘိုက စိတ်ချရပြီဟု ထင်ချိန်တွင် တရားရုံးသို့ လက်ထပ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် သွားကြပုံ၊
နေ့/တွင်း ....................[တရားသူကြီး၊ ဘိုဘို၊ သော်တာဝင်း]
တရားရုံးတွင်သူမက လက်ထပ်ရန် အလိုမတူပါဟု ထွက်ဆို၊ ဤသို့ဖြင့် သော်တာဝင်းနှင့် ဘိုဘို လမ်းခွဲကြပုံ။ သော်တာဝင်း ဤမြို့တွင် မျက်နှာ မပြလို တော့သဖြင့် သူမ၏မိခင်နှင့် နောက်ဆုံး ညှိနှိုင်းရရှိချက်အရ ရန်ကုန်သို့ ထွက် လာခဲ့ပုံ။
နေ့/ပြင်/တွင်း .......................[နေမင်း၊ အိမ်နီးချင်းများ]
အကျဉ်းထောင်၊ နေမင်း၏ နေအိမ်
နေမင်း အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်၊ သူ့ နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိ၊ အိမ်နီးနားချင်းများက ဆွေမျိုးရင်းချာ သဖွယ် ဆီးကြို၊ သူ့အမေ နာရေးဗီဒီယိုခွေ သူတို့ရုံးမှာ ရှိ ကြောင်း အသိပေး၊ နေမင်းက သော်တာဝင်း အကြောင်းမေး၊ ဘိုဘို ကားတင်ခိုးပြေးကြောင်း လောက်တော့သိ၊ ယခု ဘိုဘိုက သည်မြို့မှာ တယောက်တည်းသမား ဖြစ်နေ၍ သူတို့ ကွဲသွားဟန်ရှိ၊ ကောင်မလေးကို တော့ သည်မြို့မှာ မတွေ့ရတော့ ဟု ပြန်ဖြေကြ၊ နေမင်းကို ဘာဆက် လုပ်မလဲ ဟု မေးကြ၊ နေမင်းက အိမ်ရောင်း ပြီးလျှင် ရန်ကုန်တက်မည်ဟု ဖြေပုံ။
အဝေးပြေးကားစခန်း/ သင်္ဘောဆိပ် / ဘူတာ စသည် တနေရာ။
နေမင်း ဇာတိမြို့မှ တကိုယ်တော် ထွက်ခွာလာပုံ။
( နောက်ခံ သီချင်း ထည့်နိုင်သည်။ )
နေ့/တွင်း......[နေမင်း၊ ဆရာတော်၊ ကပ္ပိယ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းသား(၂)]
နေမင်း ဆွေမကင်း မျိုးမကင်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တကျောင်းသို့ ရောက်ရှိလာ၊ ဆရာတော်က နေမင်း၏ မိခင် အကြောင်း အနည်းငယ် မေးမြန်း၊ ထို့နောက် နေမင်း ရန်ကုန်တက်လာရခြင်း အကြောင်း မေးမြန်း၊ နေမင်း အမှန်အတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖြေ၊ ဆရာတော်က “ယောက်ျားဘသားပဲကွာ၊ ဘာမှ အားမငယ်နဲ” ဟု နေမင်းကို အားပေးပုံ။
နေရာစုံ ( ရန်ကုန် )
နေမင်း လုပ်ခဲ့ဖူးသမျှ အလုပ်များ၊ သစ်စက်၊ ကုန်ထမ်း၊ ပန်းရံ၊ ဆိုက္ကားနင်း စသည်တို့ကို Mix လုပ်၍ ပြရန်။
( နောက်ခံသီချင်း ထည့်နိုင်)
နေ့/တွင်း.........................................[ ဆရာတော်၊ နေမင်း]
နေမင်း ဆိုက္ကားနင်းရာမှ ပြန်လာ၊ ဆရာတော်က နေမင်းအား သတင်းစာထဲမှ ကုမ္ပဏီတခု အလုပ်ခေါ်သည့် ကြော်ငြာကိုပြ၊ “အစိုးရရုံးတွေမှာ စာရေးစာချီ လုပ်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံ ရှိရင် ပိုကြိုက်တယ် ဆိုရဲ့ကွယ်” ဟု ပြောပုံ။
နေ့/တွင်း........................................ [ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ နေမင်း ]
ဦးအောင်ဇေယျာက နေမင်းအား “မောင်ရင် ဘာဖြစ်လို့ အဲသည်ရုံးက ထွက်ခဲ့သလဲ” ဟုမေးသော အခါ နေမင်းက အဖြစ်မှန်ကို အမှန်အတိုင်း အကျဉ်းချုံ့၍ဖြေ၊ ထိုအခါ “မင်းကောင်မလေးနာမည်နဲ့ မင်းကို ထောင်ချလိုက်တဲ့မိန်းမနာမည် ဘယ်လို ခေါ်သလဲ” ဟု ထပ်မေးရာ နေမင်း အမှန်အတိုင်း ဖြေ၊ နေမင်း မနက်ဖြန် မှစ၍ အလုပ်ဆင်းနိုင်ပြီဟု ဦးအောင်ဇေယျာက ပြောပုံ။
နေ့/တွင်း............................[ နေမင်း၊ အခြား ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ]
နေမင်း ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း အဖြစ်ဖြင့် အနစ်နာခံ၊ ကြိုးစားပန်းစား အလုပ်လုပ်ပုံ။
နေ့/တွင်း....................................[ ဆရာတော်၊ နေမင်း]
နေမင်း ပထမဦးဆုံး ရသည့်လစာ ထဲမှ မိခင်အတွက်ရည်စူး၍ ဆရာတော်အား ဝတ္ထုငွေကပ်၊ ဆွမ်းကျွေး ပြုလုပ်ပုံ။
နေ့/တွင်း....................................[ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ လမင်းငယ် ]
ဦး အောင်ဇေယျာ နေအိမ်
လမင်းငယ်က ဖခင် ဦးအောင်ဇေယျာအား နေ့လည်က ဖုန်းဆက်သည့် ဒါရိုက်တာ အမျိုးသမီးချော တဦးနှင့် စနောက်၊ သဘောတူကြောင်းပြော၊ ဦးအောင်ဇေ ယျာက တဖန် “ငါ့သမီးမှာကော မူးလို့ရှူစရာ ရည်းစားသနာမှ ရှိပါလေစ” ဟုမေး၊ လမင်းငယ်က “ယောက်ျားတွေကို ဖေဖေ ပေးထားတဲ့ပေတံနဲ့ သွား တိုင်းတာ အခုထိ ပေမီ ဒေါက်မီ ယောက်ျား မတွေ့သေးဘူး” ဟုပြော၊ “ဖေဖေ သမီးကို အိမ်ထောင်ရေးမှာ လုံးဝ မချုပ်ချယ် ပါဘူး နော်၊ သမီးတကယ်ချစ်တဲ့ ယောက်ျား တွေ့ရင် ပြောပါ” ဟု ပြောဆိုပုံ။
နေ့/တွင်း/ပြင်..........................[ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ နေမင်း ၊ လမင်းငယ်]
ကုမ္ပဏီ ရုံးခန်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်း နေရာစုံ
လမင်းငယ် အောင်စေရာ ကုမ္ပဏီသို့ လာရောက် လည်ပတ်၊ ပြန်သွားစဉ် အိမ်သုံးမီးစက်အသေးစား တခု အိမ် သို့ သယ်သွားရန် ဦးအောင်ဇေယျာက နေမင်းကို မီးစက် အတင်အချ လုပ်ဖို့ လမင်းငယ်နှင့်အတူ ထည့် ပေး၊ သမီး သူ့ကို ထမင်း ကျွေးလိုက်နော် ဟုမှာ၊ နေမင်းက ငြင်းမည်ပြုရာ “စားလိုက်ပါ။ ဦးလည်း မောင်ရင်တို့ မြို့ သားပါကွာ” ဟု ပြော၊ လမ်းတွင် လမင်းငယ်က “အကို.. ကျမလည်း အဲဒီမြို့မှာ မွေးတယ်လို့ ဖေဖေက ပြော တယ်။ အကို ဘယ်လိုက ဘယ်လို ဒီကို ရောက်လာတာလဲဟင်” ဟုမေးရာ လိမ်ကျင့်မရှိသော နေမင်းက ထောင် ကျခဲ့ရပုံ အကျဉ်းချုပ် ပြောပြ၊ လမင်းငယ်ဂရုဏာ သက်မိ၊ အကို တယောက် ကောက်ရသလို ရှိကြောင်း ပြောပုံ။
ည/တွင်း ..............................[ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ လမင်းငယ် ]
လမင်းငယ်က သူမ၏ ဖခင်အား နေမင်း မတရား ထောင်ချခံရဖူးကြောင်း ( သူမပဲ သိသည်ထင်၍) ကိုယ်ချင်းစာ နာစိတ် ဖြင့်ပြော၊ ဦးအောင်ဇေယျာက “တိုက်ဆိုင် လိုက်ပုံများ၊ မောင်နေမင်းကို ထောင်ချလိုက်တဲ့ မိန်းမဟာ ဖေဖေ့ဇနီး၊ သမီးမေမေပဲ၊ သူ့ကောင်မလေး သော်တာဝင်း ဆိုတာက သမီးရဲ့ မမပေါ့၊ သမီးမေမေ ဂုဏ်မောက် တာကိုတော့ ဖေဖေယုံပါတယ်၊ အိမ်ထောင်ကွဲတဲ့အထိပဲလေ၊ မောင်နေမင်းအပေါ် ဖေဖေတို့ အကြွေးတင်နေပြီ သမီး၊ ဖေဖေ သူ့ကို အခါအခွင့် သင့်ရင် မြှောက်စားရလိမ့်မယ်” ဟုပြော၊ “ကောင်းပါတယ်ဖေဖေ၊ သူက လူကောင်းပါ၊ ဒီနေ့မှ သိတဲ့လူကို သူထောင်ကျဖူးတဲ့ အကြောင်း မတုန်မလှုပ် ပြောပြဝံ့ တဲ့သတ္တိ ရှိတယ်။ သမီးလည်း သူ့ကို အကို တယောက်လို ခင်သွားမိတယ်” ဟု ပြောပုံ။ ဦးအောင်ဇေယျာက လမင်းငယ်အား ငွေဂုဏ်မောက်တတ်သော မိန်းမ တယောက် မဖြစ်စေလိုကြောင်း ဆုံးမသွန်သင်ပုံ။
ည/တွင်း......................................[ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ ( စုံညီစွာ)]
လက်ရှိ MD ဦးအောင်သော် နိုင်ငံခြားသို့ အပြီး ထွက်သွားတော့မည် ဖြစ်သဖြင့် farewell party နှုတ်ဆက်ပွဲ ပြုလုပ်၊ လစ်လပ်သွားသော နေရာတွင် နေမင်းကို ခန့်အပ်ရာ နေမင်း နားမလည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေပုံ၊ လမင်းငယ် က ညီမငယ်သဖွယ် guide လုပ်ပေးသဖြင့် နေမင်း အောင်မြင်စွာ ရာထူးလက်ခံ မိန်းခွန်း ပြောနိုင် လိုက်ပုံ။ ( ဒါကြောင့် လမင်းငယ်က သူ့ကို အနောက်တိုင်း suit တစုံ ထုတ်ပေးပြီး အတင်း ဝတ်ခိုင်းပေသကိုးဟု နေမင်း ယခုမှ သဘောပေါက်လာမိပုံ )
နေ့/ပြင်............................................[ နေမင်း၊ လမင်းငယ်]
နေမင်းက မိမိမှာ လမင်းငယ်၏ အဖေက မြှောက်စား၍သာ ဤ နေရာသို့ ( အိပ်မက်ဆန်စွာ ) ရောက်လာ ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ထိုကျေးဇူးရှင်၏သမီးကို ချစ်ရေး ဆိုရသည်မှာ အတော်ခက်ခဲပါကြောင်း၊ သို့ရာတွင် ဤ အပြုအမူမှာ ကျေးစွပ်သည့် အပြုအမူ ဟု မယူဆသဖြင့် ဒီတကြိမ် ပြောလိုကြောင်း၊ နောက်တကြိမ် ပြော မည် မဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိ လမင်းငယ်ကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ချစ်ခင်စုံမက် နေမိပါကြောင်း ပြောပုံ။ လမင်းငယ်က ကျမ ရိုးရိုးသားသား၊ ဖြူဖြူစင်စင်၊ ဖြောင့်ဖြောင့်စင်း စင်းပဲ ဘဝကို ဖြတ်သန်းချင်မိ ကြောင်း၊ ပဲများတာကို မဖြောင့်စင်း မှု ဟု ယူဆသဖြင့် ပဲမများလိုကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကိုနေမင်း၏ အချစ်ကို ငြင်းဆန်ရန် အကြောင်း မရှိပါကြောင်း ပြောပုံ။
နေ့/တွင်း........................[ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ နေမင်း၊ လမင်းငယ်]
ဦးအောင်ဇေယျာက နေမင်းနှင့် လမင်းငယ်တို့ ချစ်သူ ဖြစ်ကြခြင်းကို ကန့်ကွက်ရန်မရှိ၊ သဘောတူ ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ သားအဖမှာ လူတယောက်၏ ပိုင်ဆိုင်မှု တန်ဖိုးကို ထိုသူ ပိုင်ဆိုင်သည့် ငွေကြေးဖြင့် မတိုင်းထွာဘဲ ထိုသူ၏ “ကိုယ်ကျင့်တရား”၊ “ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး”၊ “စိတ်နှလုံး အဆင့်အတန်း” တို့ဖြင့် တိုင်းတာ ကြောင်း၊ သမီးလမင်းငယ်အတွက် စိတ်ချရပြီဟု ခံစားရကြောင်း ပြောဆိုပုံ။ စေ့စပ်ပွဲပြုလုပ်မည့်လ သတ်မှတ်ကြပုံ။
နေ့/ပြင်..............................................[ နေမင်း၊ လမင်းငယ် ]
ဆွတ်ပျံ့ဖွယ် ဝန်းကျင်ရှိသည့် တနေရာ
လမင်းငယ်က နေမင်းကို “ကိုယ့်ချစ်သူ ( ခင်ပွန်း ) ကို ရင်ထဲက ဆွတ်ဆွတ်ပျံ့ပျံ့၊ ကြည်ကြည်နူးနူး၊ အားကိုးယုံကြည်စွာ ချစ်နေရင်းပင် သူ့ကို ခေါင်းထဲကလည်း အမြဲ လေးစားကြည်ညိုနေချင်သည်” ဟုပြော၊ နေမင်းကလည်း “လမင်းငယ်ကို ကြာလေ တန်ဖိုးကြီးကြီး တမြတ်တနိုးထားပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့် ချစ်လာမိလေ” ဟုပြောဆိုကြပုံ၊ မိန်းကလေးတယောက် မပေါက်မချင်း၊ ယောက်ျားလေး တယောက် မပေါက်မချင်း ကလေးယူနေကြမည်ဟု တိုင်ပင်ကြပုံ။
( နောက်ခံသီချင်း သုံးလိုက သုံးရန်။ )
နေ့/ပြင်...................[ နေမင်း ၊ သော်တာဝင်း၊ မင်းမောင်မောင်ဘို ( တနှစ်ခွဲသား )]
သော်တာဝင်း၏ တိုက်ခန်းအနီး စတိုးဆိုင် ( ရန်ကုန် )
တနေ့ နေမင်း ရုံးက ကားနှင့် ပြန်လာစဉ် စတိုးဆိုင် တခုမှ ကလေးလက်ဆွဲ၍ ထွက်လာသည့် သော်တာဝင်းကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် ကားရပ်တန့်၍ နှုတ်ဆက်၊ သော်တာဝင်း မယုံနိုင်အောင် အံ့ဩ၊ နေမင်းက မိမိကိုယ်တိုင် လည်း မျှော်လင့်မထားသော အဖြစ် အပျက်များအတွက် မယုံနိုင်လောက်အောင် အံ့ဩမိသည် ဟုဆို၊ သော်တာ ဝင်းက မလှမ်းမကမ်းရှိ သူမ၏ တိုက်ခန်းသို့ နေမင်းကို ခေါ်ဆောင်သွားပြီး သူမအကြောင်း ပြောပြ၊ သူမသည် ဘိုဘို၏ ကိုယ်ဝန်ပါလာခဲ့ရာ ကလေးကို ရန်ကုန်မှာပဲ တိုးတိုးတိတ်တိတ် မွေးခဲ့သည်၊ ယခု ကလေး တနှစ်ခွဲသား လေး ရှိလာချိန်ထိ မိခင် ဒေါ်ရတနာ ပို့သော ငွေနှင့် ရပ်တည် နေရသည်၊ အလုပ်တခု လုပ်ချင်သည်၊ အနီး အပါး မှာ ကလေးထိန်းကျောင်း ရှိသည်၊ MD ဖြစ်နေသည် ဆိုလျှင် အလုပ်တခု ပေးနိုင်မလားဟု နေမင်းကိုပြော၊ နေမင်းက ချက်ချင်း ကတိမခံခဲ့လိုကြောင်း၊ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစား ကြည့်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆင်ပြေတာနှင့် လာအကြောင်းကြားပါမည်ဟု ပြောဆိုပုံ။
နေ့/တွင်း.....................................[ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ နေမင်း]
နေမင်းက ဦးအောင်ဇေယျာအား မိမိ ယမန်နေ့က သော်တာဝင်းကို တွေ့ခဲ့ကြောင်း၊ သူမ အလုပ် လုပ်ချင်၍ အလုပ်တခု တောင်းကြောင်း၊ အခြားလူတွေ ဆိုလျှင် အလုပ်တနေရာ ပေးရတာ ကိစ္စ မရှိသော်လည်း ဤတ ယောက်မှာ မိမိ၏ချစ်သူတပိုင်း ဖြစ်ဖူးသဖြင့် ဦးကို အသိပေးခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ပြော၊ ဦးအောင်ဇေယျာက သူမကို တွေ့လိုသည်၊ မနက်ဖြန် ခေါ်ပေးနိုင်မလားဟု ပြန်ပြောပုံ။
နေ့/တွင်း........................................[ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ နေမင်း၊ သော်တာဝင်း]
ဦးအောင်ဇေယျာက သော်တာဝင်းကို “သမီးထိုင်” ဟုပြောစဉ် သော်တာဝင်းက “ဟုတ်ကဲ့ပါဦး။ ကျေးဇူးတင် ပါတယ်” ဟု ပြန်ဖြေသည်ကို ဦးအောင်ဇေယျာက “မဟုတ်ဘူး။ မဟုတ်ဘူး။ သမီးဟာ ဖေဖေ့ရဲ့ သမီး အရင်းပါ သမီးရယ်။ ဦး မဟုတ်ပါဘူး။ မောင်နေမင်း သူ့ဘဝ အကြောင်းပြောပြကတည်းက သမီးဟာ ဖေဖေ့ သမီးမှန်း သိခဲ့တယ်။သမီးမေမေ ဂုဏ်မောက်လွန်းလို့ ဖေဖေတို့ လမ်းခွဲခဲ့ကြရတယ်။ သမီးငယ်ငယ် တုန်းက ဖေဖေ သမီးအတွက် အခါအားလျော်စွာ ထောက်ပံ့ချင် တယ်လို့ သမီး မေမေ့ဆီကို ကမ်းလှမ်းဖူးပါတယ်။ သမီးမေမေက တရားဝင်ကွာရှင်းပြီး ဖြစ်လို့တဲ့။ ထပ်ပြောရင် နှောက်ယှက်မှုနဲ့ တရားစွဲမယ် ဆိုလို့ ဖေဖေတို့ စိမ်းနေခဲ့ကြရ တာ။ အခု သမီး ဖေဖေ့ ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်ချင်တယ် ဆိုရင် လုပ်ရမှာပေါ့ သမီးရယ်” ဟုပြော။ နေမင်း ယခုမှ သူ ဒီလောက် ကံကောင်းနေရခြင်း အကြောင်းရင်းကို ဇာတ်ရည်လည်သလို ရှိလာပုံ။
နေ့/တွင်း....[ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ နေမင်း၊ လမင်းငယ် ၊ သော်တာဝင်း၊ မင်းမောင်မောင်ဘို]
ထမင်းစားခန်း ( ဦးအောင်ဇေယျာ နေအိမ် )
မိသားစု ပြန်လည် ဆုံတွေ့သည့် အထိမ်းအမှတ် ညစာ၊ သော်တာဝင်းနှင့် လမင်းငယ် တို့ညီအမ နှစ်ယောက် အတိုးချ ချစ်နေကြ ၊ နေမင်းနှင့် လမင်းငယ်တို့ မကြာမီ လက်ထပ်ကြတော့မည့် အကြောင်း ဦးအောင်ဇေယျာ ပြောပြ၍ သော်တာဝင်း မကြာမီ သိသွား၊ သူမလည်း ကလေးအဖေနှင့် အဆက်အသွယ် လုပ်သင့် ကြောင်း၊ သမီးကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ ခက်ခဲနေလျှင် ဖေဖေ ဆက်သွယ်ပေးမည် ဟု ပြော၊ သော်တာဝင်း ခေါင်းညိတ်။ ဦးအောင်ဇေယျာက သော်တာဝင်းကို သည် အိမ်ကြီးမှာ လာနေစေလို သော်လည်း အမေသိသွားလျှင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေပါမည် ( မိုးမီးလောင်မည် ) ဟု ဆိုကာ သူမ၏ တိုက်ခန်းသို့ပြန်ပုံ။
နေ့/တွင်း.......................................[ ဦးအောင်ဇေယျာ၊ နေမင်း၊ ဘိုဘို ]
ဘိုဘို နယ်မြို့မှ ရန်ကုန်သို့ ရောက်လာ၊ ဦးအောင်ဇေယျာက မိမိ ဤ သမီးရော မြေးကိုပါ မွေးထားနိုင် ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် လင်မယား တော်ဖူးကြပြီဆိုလျှင် မကွဲ စေလိုတော့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သမီးကို နားချပြီး ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေး လုပ်ပေးရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဘိုဘို ကော၊ သော်တာဝင်းပါ ဤကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်လုပ် လိုက လုပ်နိုင်ကြောင်း ပြော၊ ဘိုဘိုက ကျနော့်မှာ ဟိုက မိဘလက်ငုတ် ဆေးလိပ်ခုံအလုပ်နှင့်မို့ သော်တာဝင်းကို ဟိုမြို့ကိုသာ ခေါ်သွားပါတော့မည်ဟု ပြောပုံ။ ဦးအောင်ဇေယျာ က “ခဏစောင့်ကြဦး။ ပြန်လာနေရမှာစိုးလို့၊ နေမင်းနှင့်လမင်းငယ် မင်္ဂလာဆောင် ပြီးမှ သွားကြ” ဟု ပြောပုံ။
ကိုနေမင်း နှင့် လမင်းငယ်တို့၏ လက်ထပ်မင်္ဂလာ အခမ်းအနား။
နေ့/တွင်း ....[ဒေါ်ရတနာ၊ နေမင်း၊ လမင်းငယ်၊ ဘိုဘို၊ သော်တာဝင်း၊ မင်းမောင်မောင်ဘို]
စစ်ကိုင်းချောင်တွင် ရာသက်ပန် ယောဂီ ဝတ်သွားသော ဒေါ်ရတနာအား သားသမီးတစုမှ လာရောက်ကန်တော့ အလှူတော်ငွေ ဆက်ကပ်ကြပုံ။ ဒေါ်ရတနာ မာန တွေ ကွာကျပြီး တရားအားထုတ်နေပုံ။
[ နောက်ဆုံးပိတ် ပြောချင်သည့်စကား။ ။ ဤ ဇာတ်ညွှန်း သဘာဝယုတ္တိ မတန်မှန်း ကျနော်လည်း သိပါ သည်။ ( သို့ရာတွင် မြန်မာဇာတ်ကားများမှာ Poetic License ဆိုသလို သဘာဝယုတ္တိ မတန်ခွင့် အတန် အသင့် ရှိပါ သည်း) ။ ဤ ပိုစ့် ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဇာတ်ညွှန်း၏ အခြေခံ ဖြစ်သော “Scene Serials” ကို ဘယ်လိုရေးသလဲ ဆိုတာ တင်ပြလိုရင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ဇာတ်ကား၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ “အိမ်ထောင်ရေးသည် ဈေးရောင်း၊ ဈေး ဝယ် လုပ်နေခြင်မဟုတ်။ လူ နှစ်ယောက် ပေါင်းစည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်”။ မင်းသား/ မင်းသမီး တယောက်ကို ငှါးမည် ဆိုပါစို့။ သူက Scene Serials ကို တောင်းတတ် ပါသည်။ Full script ကို တောင်းလေ့မရှိပါ။ တောင်းခွင့် မရှိပါ။နှစ်နာရီစာ ဇာတ်ကားတခုတွက် scene ပေါင်း ၄၀ ဝန်းကျင်ရှိတတ်ပါသည်။ scene တခု ပျမ်းမျှ (၃) မိနစ် ခန့် ကြာလျှင် 40 scenes အတွက် မိနစ် ( ၁၂၀ ) = ၂ နာရီ ဟု ခန့်မှန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ]
Posted by pyaykaungaung at 9:19 AM2comments:
Labels: article ဇာတ်ညွှန်း
ငါ့ရင်ထဲမှာ တစုံတရာနဲ့ အဆိပ်တက်နေလို့
( ပန်းပေါင်းတထောင် ) အဆိပ် ကို ( ကင်းပေါင်းတထောင် ) အဆိပ်နဲ့ချေရင် ပြယ်လိုပြယ်ငြား
ငါ အဆိပ်တွေ သောက်ခဲ့တယ်..။
မူလက ရင်ဘတ်ထဲမှာ တမြေ့မြေ့ ကျွမ်းလောင် ပူမြိုက် နေတဲ့
အခုတော့ ဦးနှောက်ထဲမှာလည်း တဆစ်ဆစ် ကိုက်ဖဲ့ခြင်းကို ခံနေရတဲ့
အဆိပ် တခု တိုးလာလေရဲ့..။
( ကိစ္စတခုနှင့် ပတ်သက်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လှောင်ပြောင် ရေးဖွဲပါသည်း))
Posted by pyaykaungaung at 9:46 AM2comments:
Labels: article ကဗျာ
အပြောအဟောပညာ။ ။ အိုဘားမား မကြာသေးမီက ပြောခဲ့တဲ့ မိ...
အပစ်ရပ်သွားသော အေကေ-၄၇ တလက် ( My Birthday Resolu...